Urur haween oo wax u qabanaya haweenka la furay iyo kuwa laga dhintay oo howlo ka bilaabay Jowhar+sawiro – idalenews.com
Ururka haweenka ee MOM oo ah urur wadani ah ayaa howlo uu wax ugu qabanayo haweenka la furay iyo kuwa laga dhintay ka bilaabay xarunta gobolka Sh.dhexe ee Jowhar.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh.dhexe oo aysan hore uga howlgali jirin saddexdii dambe ee u dambaysay ururo haween ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo la doonayo in wax loogu qabto haweenka gobolka ku nool.
Marwo Maryan Geedi Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka hooyada hooyooyinka ee MOM ayaa waxaa ay sheegtay in ururka uu bilaabay sidii uu diiwaangelin ugu samayn lahaa haweenka la furay iyo kuwa laga dhintey ee ku nool magaalada Jowhar.
Kulan arrintaas loogaga hadlayay oo lagu qabtay xarunta ururkan ayaa ay guddoomiyaha ururkan Maryan Geedi waxa ay sheegtay in ay jiraan boqolaal haween ah oo ku dhibaateysan gobolka Sh.dhexe kuwaasoo u baahan in wax loo qabto.
“Raggu marka ay furaan haweenka dib uguma soo noqdaan waxaana xilka carruurta garabka u rita hooyada oo mar walba xanaaneyntooda dhibaato kala kulma”. Ayay tiri Maryan Geedi Maxamed.
Maryan Geedi ayaa waxa ay ugu baaqday hay’adaha samafalka in ay garab istaagaan haweenka lagu furo carruurta,kuwa haysta ilmaha agoonta ah iyo haweenka lixaadkoodu uu kala dhiman yahay.
Waa markii ugu horeysey ee urur sheegay in uu wax u qabanayo haweenka la furo iyo kuwa carruurta agoonta ah haysta uu kahowgalo gobolka Sh.dhexe.